မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ်...! - Thadin
HomeNEWSမြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ်…!
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ်…!
April 20, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြစ်ဆုံစီမံကိန်း တစ်ဦးတစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုစတင်မယ်…!
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ဖို့အတွက် တစ်ဦး ကို တစ်ဒေါ်လာပေးလျော်မယ့် လှုပ်ရှားမှု စတင်မယ်လို့ ဦးဆောင်ပြု လုပ်ကြမယ့်သူများက ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဧရာဝတီကို ပြန်ရွေးယူကြမယ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ၊ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကြေညာခဲ့တာပါ။
ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တန့်ဖို့အတွက် တရုတ်သမ္မတ ဆီကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ လည်း ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက တရားဝင်ကုန်ကျထားတာတွေကို ပြန်ပေးလျော်မယ်လို့ ဧရာဝတီကိုပြန်ရွေးယူဖို့ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေသူတွေက တရုတ်သမ္မတဆီထံ စာပေးပို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ပြန်တည်ဆောက်လိုကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေ အထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ရန်ကုန်မှာ ဒီနေ့ပြုလုပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီကို ပြန်ရွေးယူကြမယ်ဆိုတဲ့ ဟောပြောပွဲကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
ဒီဟောပြောပွဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ မိုးလေဝသပညာရှင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်၊ ကာတွန်းဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင်၊ တေးရေးဆရာနဲ့ အဆိုတော် စတဲ့သူတွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဒါကို လျစ်လျူရှုပြီး ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာအချိုးနှိမ်ခံရတယ်၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုပြီး စွဲမှတ်ယူကြနိုင်လို့ တရုတ်- မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာ ပြင်ဆင်ဖို့ခက်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာချုပ်ပါအတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံက တရားဝင် ကုန်ကျထားတာတွေကို ပေးလျော်ဖို့အတွက်လည်း ကမ်းလှမ်းလိုက်သလို ဒါကို အဖြေအဖြစ် လက်ခံဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မွဈဆုံစီမံကိနျး ရပျတနျ့ဖို့အတှကျ တဈဦး ကို တဈဒျေါလာပေးလြျောမယျ့ လှုပျရှားမှု စတငျမယျလို့ ဦးဆောငျပွု လုပျကွမယျ့သူမြားက ဆိုလိုကျပါတယျ။
အဲဒီလှုပျရှားမှုကို ဧရာဝတီကို ပွနျရှေးယူကွမယျ ခေါငျးစဉျနဲ့ ရနျကုနျမွို့ ၊ နိုဗိုတယျ ဟိုတယျမှာ ကငျြးပတဲ့ ဆှေးနှေးပှဲမှာ ကွညောခဲ့တာပါ။
ဆှေးနှေးပှဲမှာတော့ မွဈဆုံစီမံကိနျးရပျတနျ့ဖို့အတှကျ တရုတျသမ်မတ ဆီကို အိတျဖှငျ့ပေးစာ လညျး ပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယျ။
မွဈဆုံစီမံကိနျး အပွီးတိုငျ ရပျတနျ့ဖို့နဲ့ မွဈဆုံနဲ့ပတျသကျပွီး တရုတျနိုငျငံက တရားဝငျကုနျကထြားတာတှကေို ပွနျပေးလြျောမယျလို့ ဧရာဝတီကိုပွနျရှေးယူဖို့ ဦးဆောငျလှုပျရှားနသေူတှကေ တရုတျသမ်မတဆီထံ စာပေးပို့ကမျးလှမျးလိုကျပါတယျ။
ရပျဆိုငျးထားတဲ့ မွဈဆုံစီမံကိနျးကို မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျသံအမတျကွီးက ပွနျတညျဆောကျလိုကွောငျး သတငျးတှေ ထှကျပျေါနတောကွောငျ့ မွနျမာပွညျသူတှေ အထူးစိုးရိမျနကွေတယျလို့လညျး အိတျဖှငျ့ပေးစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
အဲဒီ အိတျဖှငျ့ပေးစာကို ရနျကုနျမှာ ဒီနပွေု့လုပျနတေဲ့ ဧရာဝတီကို ပွနျရှေးယူကွမယျဆိုတဲ့ ဟောပွောပှဲကနေ ထုတျပွနျလိုကျတာပါ။
ဒီဟောပွောပှဲမှာ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ မိုးလဝေသပညာရှငျ၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ ပညာရှငျ၊ ကာတှနျးဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ သရုပျဆောငျ၊ တေးရေးဆရာနဲ့ အဆိုတျော စတဲ့သူတှေ ပါဝငျဆှေးနှေးပွောဆိုနကွေပါတယျ။
ဒါကို လဈြလြူရှုပွီး ဆကျလုပျမယျဆိုရငျတော့ မွနျမာတှဟော ဂုဏျသိက်ခာအခြိုးနှိမျခံရတယျ၊ အနိုငျကငျြ့ခံရတယျဆိုပွီး စှဲမှတျယူကွနိုငျလို့ တရုတျ- မွနျမာဆကျဆံရေးမှာ ပွငျဆငျဖို့ခကျတဲ့ ဆိုးကြိုးတှေ ရငျဆိုငျရနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မွဈဆုံနဲ့ပတျသကျပွီး စာခြုပျပါအတိုငျး တရုတျနိုငျငံက တရားဝငျ ကုနျကထြားတာတှကေို ပေးလြျောဖို့အတှကျလညျး ကမျးလှမျးလိုကျသလို ဒါကို အဖွအေဖွဈ လကျခံဖို့လညျး တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
ယောက္ခမနှင့် အဆင်ပြေစေနိုင်သော နည်းလမ်းများ…!
နေပူထဲ ကြက်ဥ ကြော်ပြတဲ့သူကို ရဲကဖမ်းဆီး…!
This Year : 236683
Total Users : 595707
Total views : 2736722